Azontsika atao ve ny mahazo tsara kokoa amin'ny marketing amin'ny tenantsika? | Martech Zone
Azontsika atao ve ny mahazo tsara kokoa amin'ny marketing amin'ny tenantsika?
Sabotsy, Oktobra 1, 2016 Douglas Karr
izany loka spoof mahafinaritra ny horonan-tsary. Ny hatsikana tsara indrindra dia toa miorim-paka hatrany amin'ny fahamarinana, ary azo antoka fa ihomehezana ny fandefasana loka. Tsy mari-pankasitrahana poo-pooing tanteraka aho; Mino aho fa ilaina ny fanekena ny indostria. Manome porofo ny fahefanao izy io ary mampitombo ny fahatsiarovan-tena ho an'ny mpihaino tena mifandraika amin'izany.
Manana mampino isika maso ivoho fifandraisana izay iarahantsika miasa. Izy ireo dia feno tànana miaraka aminay, manosika ny vokatray (ity famoahana ity) ho loharano, ny masoivoho marketing digital amin'ny maha-mpitarika azy, i Jenn ho a marketing MC sy mpandahateny, ary ny tenako ho a mpitarika eritreritra marketing, mpandahateny ifotony marketing, ary mpandahateny marketing. Ny zavatra lehibe momba ny PR PR dia manosika antsika foana izy ireo hanavaka ny tenantsika. fanandratana tena tsy menatra. Ugh.
Miala tsiny amin'ny rohy mankaleo misy rohy buzzworthy fampiroboroboana tena tsy mahamenatra. Meloka koa aho.
Tsy azoko antoka hoe aiza no manjavozavo ny andalana eo amin'ny ego sy fahatokisan-tena, fa tsy mora izany. Eo anelanelan'ny fandalinana tranga am-bifotsy izay tsy misy afa-tsy ny valiny tsara indrindra azonao, hatramin'ny fanangonana teny buzzword, amin'ny fandalinana tranga am-bifotsy - dia mendri-piderana daholo izany. Fantatro izao hoe manao ahoana ny manoratra kabary politika, ny valin'ny RFP ary ny famoahana gazety ho fivelomana.
Androany nesoriko ny kitapoko schwag tamin'ny kaonferansa - charger an-tariby, fijanonana finday maloto, USB thumb drive, moleskin, pads post-it, ary mpamoha tavoahangy labiera hafa. Jonathan Green, mpanoratra ny Green's Dictionary of Slang, namerina ilay teny schwag, tsy hino ny niandohan'ity teny ity ianao:
Ny marijuana ambany kalitao dia nantsoina hoe ditchweed, schwag, ary skunkweed.
Noheveriko foana fa ny schwag dia ilay feon-java-bary vita amin'ny foza rehefa namely ny fitoeram-pako hotelinao. Fa tsia. Mbola ratsy kokoa aza… ny mitovy amin'ny mivarotra vilany mihintsy. Tsy mbola nivarotra vilany aho, saingy azoko an-tsaina fotsiny ny fanatanterahana asa iray. Ny varotra crappy dia tokony ho ratsy kokoa.
Mila mivarotra ny tenantsika isika, fa tsy mila manao azy toy ny olon-drehetra.
Ity no eritreretiko rehefa mijery ny indostria misy ahy aho:
Ny zava-misy fa tsy maintsy ataontsika dia tsy manakana antsika tsy ho original. Ho fitsinjovan'Andriamanitra, ry havana, andao hametraka eritreritra kely amin'ny marketing. Manavaka ny tenanao amin'ireo namanao ary aza manandrana maka tahaka azy ireo.
Ok, izao no fotoana itondranao ahy ho any an-tanàna ho an'ny marketing tsy mahomby. 😉
Tags: fampisehoana lokamari-pankasitrahanamanamarina ny tenanaohambom-pon'nytiako ny tenakomarketing ny tenanao
Haingam-pandeha: Maninona ny fahombiazana no lakilen'ny Smart Marketer
Fitaovana 5 hanampiana amin'ny fanamboarana ny varotrao mandritra ny fialantsasatra